Ninkii gacanta ka geystay joojinta dagaalkii Qaboobaa oo geeriyooday | Xaysimo
Home War Ninkii gacanta ka geystay joojinta dagaalkii Qaboobaa oo geeriyooday
Ninkii gacanta ka geystay joojinta dagaalkii Qaboobaa oo geeriyooday
George Shultz, xoghayihii hore ee arrimaha dibedda Mareykanka oo si weyn u qaabeeyey siyaasaddii arrimaha dibadda dhammaadkii Qarnigii 20-aad, ayaa dhintey isagoo da’diisa ay tahay 100 sano jir.
Wuxuu Sabtidii ku dhintay gurigiisa oo ku yaal Stanford, California, sida uu sheegay Machadka Hoover.
Xarunta daraasadka Hoover Institution, oo Mr Schultz uu si sharaf leh fikradihiisa ku soo bandhigi jiray ayaa sheegtay in ninkan dowliga ah uu kaalin weyn ka qaatay “bedelida jihada taariikhda isagoo adeegsaday diblomaasiyad si loo soo afjaro Dagaalkii Qaboobaa”.
Agaasimaha Mac’hadkaHoover Condoleezza Rice – oo iyadu ahayd xoghayihii hore ee arrimaha dibadda – waxay tiri: “Saaxiibkeen wuxuu ahaa nin weyn oo Mareykan ah oo waddani dhab ah marka dhinac walba laga eego.”
”Taariikhda ayaa lagu xasuusan doonaa inuu yahay nin adduunka ka dhigay meel wanaagsan” , ayay tirir Condeleeza Rice.
Qoraalka sawirka,Wuxuu xilal kala duwan ka qabtay xukuumadahii saddex Madaxweyne oo Jamhuuriya – Dwight Eisenhower, Richard Nixon iyo Ronald Reagan
George Shultz qof nocee ah ayuu ahaa?
Qoraalka sawirka,Mr Shultz iyo hoggaamiyihii Sofiyeetka ee xilligaas 1980-kii Mikhail Gorbachev
Markii la gaadhay 1987 Mr Reagan iyo Mr Gorbachev waxay kala saxeexdeen heshiis taariikhi ah oo lagu xakamaynayo hubka. Dhowr sano ka dib, Midowgii Soofiyeeti wuu burburay.